घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य- LifeBogger। क्रेडिट: Picuki
एलबीले फुल स्टोरीको फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ उपनाम "रिक“। हाम्रो तारिक लैम्प्टे बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको जीवनमा उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता तपाईंको लागि ल्याउँदछ।
जीवन र तारिक Lamptey का उदय। छवि क्रेडिट: Picuki
हाम्रो विश्लेषणमा लामेटेको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ख्याति अघि जीवन कहानी, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू र जीवनशैली समावेश छ। अधिक, घानियन पारिवारिक जराका साथ फुटबलरको बारेमा अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू।
हो, सबैलाई थाहा छ उसले आफ्नो गति, समय र सरासर बहादुरीबाट प्रशंसकलाई प्रभावित गरी उसले आफ्नो चेल्सीको वरिष्ठ पदार्पण गरेका समयमा फ्रैंक लम्पर्ड. जहाँसम्म, केवल एक हातले मात्र तारिक लैम्प्टेयको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
तारिक लैम्प्टेको जन्म सेप्टेम्बर २००० को हिलिंग्डन, लन्डनमा भएको थियो। Tऊ घानियन परिवारबाट फुटबलर नयाँ सहस्राब्दीको सुरुमा जन्म भएको थियो। तारिकको जन्म वर्षमा आएको थियो (2000) जहाँ पहिले दाबी गरीएको टेक्नोलोजिकल अवरोधहरू हुन्छन्- वास्तवमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। त्यहाँ थिएन Y2K बग र हवाइजहाजहरु पूर्वानुमान गरी कहिल्यै आकाश बाट गिरेन। साथै, क्षेप्यास्त्रहरू कहिल्यै दुर्घटनाबाट उडाएनन्।
तारिक लाम्प्ते परिवारमा जन्मिएको थियो जुन अनुसन्धानका अनुसार सम्भवतः मुस्लिम अफ्रिकामा रहेको ट्रेस शहरको परिवार भएको छ। उत्तरी घाना ठ्याक्कै नाम "Tariq"अरबी मुस्लिम नाम हो जसको अर्थ हो"बिहानी तारा“। घानियन जराका फुटबलरहरू दोस्रो बच्चा र छोरा छोराको रूपमा जन्मेका थिए आफ्ना प्यारा आमा बुबाका लागि जो तल चित्रण गरिएको छ।
तारिक लैम्प्तेका अभिभावकलाई भेट्नुहोस् - उहाँहरूसँग असल बुबा, अहमद र आमा। क्रेडिट: GhanaSoccerNet
तारिक धनी परिवारको पृष्ठभूमिमा हुर्केका थिएनन्। उनका बुवा र आमा ग्रेटर लन्डनमा प्रायः औसत काम गर्ने वर्गका मानिसजस्तै थिए जसले आफ्नो औसत पारिश्रमिक परिवारको पालनपोषणको लागि चलाउँथे। तारिक लाम्प्तेका अभिभावकहरूको परिवारमा सबै पुरुष र शून्य महिलाहरू थिए।
फुटबलर जो आफ्नो परिवारको रोटी विजेता हुन जान्छ आफ्ना दाजुहरूसँगै हुर्कियो (एक जेठो दाइ र दुई बच्चा भाई). तल चित्रित, उसको जस्तो देखिने भाइबहिनीहरूले आफ्ना प्रारम्भिक वर्षहरू लन्डन बरो अफ हिलिilling्गनमा बित्यो।
यो सैनिकहरूको परिवार हो - लम्प्ते, तिनका तीन भाइहरूसँग हुर्किए। क्रेडिट: GhanianSoccerWeb
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - क्यारियर निर्माण र शिक्षा
२०० 2003 मा, चेल्सी एफसी सबैभन्दा नयाँ बन्यो परिवार-मैत्री क्लब फुटबल प्रशंसक सबै धन्यवाद रोमन अब्रामोविच जुन जून २०० 2003 मा यस क्लबको अधिग्रहण र सुधार गरिएको थियो। तारिक लाम्प्टेका बाबुआमाले त्यसबेला उनलाई जन्म दिएका थिए (ऊ years बर्षको थियो).
चेल्सी एफसीको कायाकल्पको क्रममा धेरै परिवारले क्लबका लागि आफ्नो सहयोगको वाचा गरे र तारिक लाम्प्टेको परिवार पनि यो अपवाद थिएन। वास्तवमा, उसको परिवारले स्ट्यामफोर्ड पुलमा उनीहरूको पारिवारिक घरबीच ठूलो निकटताको आनन्द उठाए।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… लण्डन बरो हिलिंग्डन जहाँ तारिक लाम्प्टेको परिवार बस्थ्यो स्ट्यामफोर्ड ब्रिजबाट धेरै टाढा थिएन।चेल्सी एफसी स्टेडियम)। तल अवलोकन गरिए अनुसार योa45 मिनेट ड्राइभ मात्र थियो।
तपाईंलाई थाँहा थियो… हिलिंगडनमा तारिक लैम्प्टेको परिवार घर स्ट्यामफोर्ड ब्रिजको लागि केवल-45 मिनेटको ड्राइभ थियो
तारिक अलि ठूलो भएपछि उनले खेलकुद गतिविधि बाहेक अन्य फुटबललाई पनि मन पराए। त्यतिखेर, उसको परिवारका सबै सदस्यहरू खुशी भए माइकल एसेनन - उस्को उस्तै Ghanian परिवार मूल बाट एक खेलाडी। खेलको लागि तारिक लेम्प्टेको प्रेमले प्रतिष्ठित चेल्सी एफसी एकेडेमीबाट फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा उनको रुचि बढायो। निस्सन्देह, एकेडेमी खेलाडी बन्नको लागि उहाँ एक कल्पना कल्पना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तारिक लाम्प्टेका अभिभावकहरूको खुसीको सीमा थिएन जब उनीहरूको छोरालाई लन्डनको प्रख्यात प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो।
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एक पेशेवर फुटबलर बन्ने यात्रा वर्ष २०० 2008 मा शुरू भयो, त्यस्तो समय जब तारिक (उमेर)) चेल्सी एफसीको जुनियर वि wing्गमा सफलतापूर्वक भर्ना भयो। यो चेल्सी एफसी एकेडेमीमा भर्ना हुने सबै बच्चाहरूको सपना थियो। भर्ना गरिसकेपछि लाम्प्टेले धेरै त्यागहरू गरे। धेरै पटक उसले जन्मदिनको पार्टीहरू र चीजहरू याद गरे जुन उसले आफ्नो परिवारको घरमा खोजिरहेको थियो। तपाईं फ्लिप पक्षमा, जवानले निरन्तर आफूले प्रेम गरेको कुरा गर्यो [फुटबल खेल्दै].
प्रायः चेल्सी एफसी एकेडेमी बच्चाहरू भन्दा फरक जो होस्ट परिवारहरूसँगै थिए (उनीहरूको घरबाट दूरीका कारण), ल्याम्प्टेको केस फरक थियो किनकि ऊ यस्तै भाग्यमानी केटा थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… कोल्भममा अवस्थित चेल्सी एफसी एकेडेमी मैदान हिलिंगडनमा आफ्नो परिवारको घरबाट केवल minutes० मिनेट टाढा थियो।
प्रारम्भमा, तारिक लाम्प्टेका आमा बुबाआमाले उनलाई हरेक दिन कोभम पुग्ने बिचको बीचमा बदल्न थाले जुन उनलाई एक युवा फुटबलरको रूपमा उत्कृष्ट बनाउन सबै समर्थन प्रदान गर्ने थियो। तारिकले एकेडेमीका आधारमा बढाए जुन निम्न उदाहरणहरू छन् माइकल एसेनन, उहाँको रोल मोडेल। उसलाई क्लबमा एक छाप पार्न लामो समय लागेन।
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकको प्रसिद्धि
अपेक्षित रूपमा, तारिक धेरै चाँडै एकेडेमीमा उत्रियो जुन उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू बिरूद्ध विशेष गरी उनीभन्दा ठूलाहरूलाई जितेका थिए। उनी किशोरावस्थामा पुगेको बित्तिकै चेल्सी वरिष्ठ टीमको भाग बन्ने सपना तीव्र भए।
तारिक सफलता प्राप्त गर्न थाहा थियो, यो आवश्यक थियो कि उसले टेक्निकल क्वालिटी पछ्याए “सानो भाग्य“। त्यो प्राविधिक गुण उसको अन्धो गतिमा आयो जुन उसको बिक्री बिन्दु बन्यो।
तारिक लेम्प्टेले आफ्नो गति एकेडेमी दिनहरूमा आफ्नो बिक्री पोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्थे
टर्निंग बिन्दु: तारिक लाम्प्टेको युवा जीवनको मोड २०१/2016 / २०१ season को मौसममा आयो। यो उनले पहिलो ट्रफी लिने मौसम हो। त्यो सत्रमा युवाले आफ्नो टीमलाई उनीहरूको अविस्मरणीय U१ Pre प्रिमियर लिग ट्रफी जित्न मद्दत गरेको देख्यो।
तारिक लम्प्ते रोड टु फेम स्टोरी- उनले आफ्नो टीमलाई अ १ 18 प्रिमियर लिग जित्न मद्दत गरे। क्रेडिट: पिकुकी
थप सफलता २०१/2017/२०१ season मा जारी रह्यो जसले जवान केटालाई उनको क्याबिनेटमा थप ट्राफियां थपिएको देखे। त्यो सिजन, लाम्प्लेले योगदान दियो ११ सहयोग जुडी मोरिस ' पक्ष एक अभूतपूर्व चौगुना सुरक्षित (एक मौसममा चार ट्राफीहरू)। तल चित्रित जवान छ किनकि ऊसँग २०१ achievements/२०१ season सिजनका उपलब्धिहरू छन्।
तारिक लेम्प्टेले २०१//१2017 सत्रमा एकेडेमी खेलाडीको रूपमा सबै कुरा जित्यो। क्रेडिट: पिकुकी
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
पहिले देखिएझैं, Lamptey को लागि अतिरिक्त माइल गए मान्यता, प्रशंसा र पुरस्कार ट्राफियां प्राप्त गरेर। उसको सफलताको लागि पुरस्कारको रूपमा, चेल्सी एफसीले उनलाई आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। यो घटना तारिक लाम्पेको परिवारका सदस्यहरूका लागि रमाइलो क्षण थियो।
मेहनतीको लागि तारिक लाम्प्टेको पुरस्कार आयो किनकि उनले आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। क्रेडिट: Picuki
म गर्व गर्छु कि चेल्सीया fc को साथ मेरो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। म केवल मेरो परिवारलाई उनीहरूको सहयोगको लागि धन्यवाद दिन्छु र उहाँको सबै निर्देशनहरूका लागि।
एक खुशी तारिकले इन्स्टाग्राम मार्फत आफ्ना खुशीको शब्दहरू साझेदारी गरे। नयाँ सम्झौतामा छाप लगाएपछि, लाम्प्तेलाई चेल्सी वरिष्ठ युवा टोलीमा पठाइयो जहाँ उनले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरिरहे। चेल्सी वरिष्ठ टीममा आफ्नो स्थान कमाउन वा अन्य क्लबबाट भर्ती गर्नेहरूको अवसर प्राप्त गर्न उसले आफ्नो सीपको प्रयोग गरिरह्यो। तल भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
अविस्मरणीय डेब्यू: त्यो धेरै-प्रतीक्षित क्षण अन्तमा २०१ of को नजिक आईपुग्यो। यहाँ कथा जान्छ: Cesar Azpilicueta एउटा सानो चोटपटक थियो र उसको स्थितिको नजिकको प्रतिद्वन्द्वी लेम्प्टेई (रेस जेम्स) पनि घाइते भयो। Tयहाँ लागि बढ्दो प्रवृत्ति थियो फ्रैंक लम्पर्ड आशाको किरण प्रदान गर्दछ कि केहि बाहिर खोज्न दायाँ पछाडि चेल्सी किंवदन्तीले तारिक लेम्प्टेमा विश्वास गरे र विश्वास गर्थे कि उनले यो काम गर्छन्।
उसको छेउमा चोटपटक लागेका, ल्याम्पार्डले आफ्नो टीमलाई जित्नको लागि कसैको खोजी गर्यो। उनले तारिक लाम्प्तेलाई भेट्टाए। क्रेडिट: फेसबुक, प्रीमियरलीगुनेवन्न, मेट्रो र एसबीनेसन।
१-० गुमाउँदै आशाको खोजीमा, लम्प्टेले चेल्सीलाई प्रतिद्वन्द्वी आर्सेनलको बिरूद्ध स्पार्कको आवश्यक समयको डिलिभरी गर्नुभयो। ''1 "दायाँ पछाडि उत्प्रेरक भयो जसले टोलीलाई गति र प्रेरणा इंजेक्सन गर्‍यो, उनले आफ्नो पहिलो प्रदर्शन दाबी गरे जुन डर्बीको जीतबाट सुरु भयो।
कुनै श doubt्का बिना, फुटबल प्रशंसकहरू अर्को हेर्न को कगार मा छन् डानी एल्व्स हाम्रो आँखाको अगाडि विश्व-स्तरीय प्रतिभामा उसको बाटो पुग्न। तारिक लम्प्टे हो वास्तवमा सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक अन्तहीन स्ट्यामफोर्ड ब्रिज उत्पादन लाइनको बीचमा बिजुलीको गति बाट विंग-आधा। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्ध जीवन
उनको वरिष्ठ टोली डेब्यू पछि प्रसिद्धि मा उगने संग, यो निश्चित छ कि केहि प्रशंसकहरु सोच्नु पर्छ कि तारिक Lamtete एक प्रेमिका छ कि छैन। Tयहाँ कुनै तथ्य छ कि उसको प्यारा बच्चा पृष्ठभूमि उसको खेल को शैली संग जोडिएको देखिन्छ उसलाई हरेक सम्भावित प्रेमिका इच्छा सूची को शीर्ष मा राख्दैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्दै छ।
प्रशंसकहरूले सोध्न थाले कि तारिक लैम्प्टेको प्रेमिका को हुन सक्छ। क्रेडिट: Picuki
घण्टा इन्टरनेट सर्फिंग खर्च गरेपछि, हामी दुई निष्कर्षमा आएका छौं। पहिलो, यो लेख्ने समयमा देखा पर्दछ, लेम्प्टेले आफ्नो प्रेमिका को प्रकट गर्न सचेत प्रयास गरेको छ।
दोस्रो, उहाँ लेख्दा पनि एकल हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सम्भावना पनि हुन सक्छ कि ऊसँग श्रीमती हुन सक्छ तर उसले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्‍यो। हामीले उसको उमेरका युवा खेलाडीहरू देख्यौं; को मनपर्दो Ismaila Sarr जसले लेम्पटेको उमेरमा विवाह गरे। तर एउटा कुरा पक्का छ, तारिक लैम्प्टे पक्कै प्रेमी - केटाको लिगमा छैन। फिल फडन.
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन
तारिक लाम्प्टेको व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू खेलको क्षेत्रबाट टाढा जान्न तपाईंलाई उहाँको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दै, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ जो सबै परिस्थितिमा प्यारा मुस्कान राख्नुहुन्छ। अभिप्रायले, तारिक एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हुन् जो भद्र हृदयको छ र द्वन्द्वबाट बच्न लगभग केहि गर्न तयार छ। उहाँ एक संगठित केटा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा एक विधवात्मक दृष्टिकोण लागू गर्नुहुन्छ।
तारिक लैम्प्टे निजी जीवन पिचबाट टाढा छ। क्रेडिट: Picuki
१.1.70० मिटर उचाई भएको उहाँ छोटो हुनुहुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। यद्यपि तारिक लैम्प्टे विश्वास गर्दछन् कि ऊँचाइको अभावले अथाह प्राविधिक क्षमताले क्षतिपूर्ति दिन्छ। पिचबाट टाढा, ऊबाट प्रेरणा आकर्षित गर्दछ कलम हडसन ओडिडी, उनको साथी ब्रिटिश-घानियन भाई जो उहाँ परिवारको जस्तो छ।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा, Lamptey एक हुन जसलाई तपाईं सायद थाहा थिएन एक राम्रो गेमर छ। फुटबल देखि टाढा, फुटबलर आफ्नो प्लेस्टेशन (PS4) को लागी केहि घण्टा गुमाउन मन पर्छ शायद फिफा वा कल अफ ड्युटी (सीओडी) खेल्दै। आफ्नो शौक प्रयोग गर्ने केटाको फोटो तल फेला पार्नुहोस्।
तारिक लैम्प्ले भिडियो खेल खेल्न मन पराउँछन् जुन उसको शौकको हो। क्रेडिट: Picuki
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन
यो खण्डमा, हामी तारिक लाम्प्टेको परिवारको बारेमा उनको बुबाबाट शुरू हुने बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
तारिक लाम्प्तेको बुबामा अधिक: २ L डिसेम्बर २०१ 29 मा - अहमद लाम्प्ते एक मानिस थिए जो आफ्नो छोराले व्यावसायिक पेशा गरेका थिए। घनवेबका अनुसार तीब्र देखिने अहमद लाम्प्ते फुटबल एजेन्ट हुन् जसले छोराको क्यारियरको रुचि सम्हाल्छ।
जब उनले चेल्सी एफसीसँग पहिलो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे त्यस समय तारिक लाम्प्टेका अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्। क्रेडिट: Picuki
लेख्ने समयमा, तारिक लाम्प्टेका बुबा अहमद अझै खुला छन् कि उनको छोराले घानाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ कि इ England्गल्यान्डसँगै। यदि उसले घाना छनौट गर्छ भने, उसले आफ्ना आमाबाबु मार्फत घानियन नागरिकता पाउने छ। घानावेबका अनुसार लाम्प्तेका बुबा घानाको भ्रमण गर्न मन पराउछन्।
तारिक लैम्प्टेकी आमाको बारेमा अधिक: ठुलो आमाहरूले ठूला छोराहरू जन्माइन् र तारिक लाम्प्तेको आमा भने एक अपवाद होइन। यस फुटबलरले आफ्नो सफलताको श्रेय उसकी आमाले दिएको पालनपोषणको लागि दिन्छ। लाम्प्टेको आमाले गर्व गरीरहेको छ कि अहिलेसम्म उनले आफ्ना सेनाका लागि मातृत्वको कर्तव्य सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरेका छन्।
तारिक लैम्प्टेका परिवारका सदस्यहरूसँग भेट्नुहोस्। क्रेडिट: GhanaSoccerNet
तारिक लेम्प्टेका भाइबहिनीहरूमा थप: भनिन्छ कि लेख्ने क्रममा तारिक लम्प्ते उनका परिवारका रोटी खाने नोकर हुन् जसलाई उनका brothers जना भाईको नाम अज्ञात छ। सम्भवतः, उनका एक भाइ आफ्नो पाइला पछ्याउन चाहन्छन्। तारिक निस्सन्देह आफ्ना भाइहरूको लागि एक राम्रो रोल मोडेल हो र उनीहरूलाई आफूले जानेका सबै चीजहरू साझेदारी गर्न तयार हुन्छ।
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - जीवन शैली
उसको अभिभावकले उचित पालनपोषण गरेकोमा धन्यवाद, लैम्प्टेको जीवनको वित्तीय पक्ष प्रायः नियन्त्रणमा हुन्छ। उसको वार्षिक वेतन र साप्ताहिक ज्याला भविष्यमा बढ्न सेट भए पनि, यो सम्भव छ कि युवा फुटबलरले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्दैन। तारिक हाल जीवन शैली जीउँदैनन् जुन विदेशी कार, ठूला हवेली इत्यादिद्वारा सजिलैसँग सजिलै देख्न सकिन्छ।
तारिक लैम्प्टे यस किसिमको कार, ठूला मन्सेन्स इत्यादि द्वारा सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सकिने बाहिरी जीवन शैली बाच्दैनन्
बचत र खर्चको बीचमा स्वस्थ सन्तुलनको आश्वासन छ। छुट्टीको लागि दुबई जानुहुँदा पनि, लैम्प्टेले खर्चको चाहनालाई कमै मात्र राम्रो गरे। तल चित्रित, उनको ड्रेसिंगले उसको नम्र जीवनशैलीको राम्रोसँग बोल्दछ।
तारिक लैम्प्टे लाइफस्टाइल जान्ने। क्रेडिट: Picuki
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अनियमित तथ्यहरू
उनका अभिभावकको पूर्व चेल्सी (टेक्निकल निर्देशक) सँग घनिष्ट सम्बन्ध थियो: अनुसार मिररअनलाइन, तारिक लैम्प्टेका आमा बुबा का एक पटक चेल्सी एफसी व्यवस्थापन भित्र गहिरो सम्बन्ध थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको परिवार धेरै नजिक छ माइकल Emenalo जो चेल्सीको पूर्व सहायक प्रबन्धक थियो। माइकल इमेनालो २०११ देखि २०१ until सम्म चेल्सी फुटबल टेक्निकल निर्देशक बने जब उनले राजीनामा गरे। शक्तिशाली मानिस पनि नजिक छ Lampard.
तारिक लाम्प्तेका आमा बुबा का एक पटक चेल्सी व्यवस्थापन भित्र कडा सम्बन्ध थियो। उनको परिवार माइकल इमेनालोसँग नजिक थिए। उनी चेल्सीका पूर्व निर्देशक थिए। क्रेडिट: मेट्रो र Picuki
के तपाईंलाई पनि थाहा थियो?… माइकल इमेनालोको तारिक लाम्प्टेलाई एएस मोनाकोमा हेर्न चासो छ जहाँ उनी फुटबल निर्देशकको रूपमा काम गर्दछन्। यही कारण हो कि चेल्सी आफ्नो प्रभावशाली पदार्पण पछि लाम्प्टेसँग वार्ता पुनः खोल्न धेरै इच्छुक छन्।
चेल्सिआ पहिलो टीम को अनुभव: तारिक लैम्प्टेले चेल्सी टिभीसँग चेल्सी पहिलो टीममा खेल्ने आमन्त्रितको बारेमा आफ्नो अनुभव साझा गरे। उसको शब्दमा;
“मेरो मुटु पहिले जस्तो दौडिरहेको थियो। फ्रान्क [ल्याम्पार्ड] ले मलाई भन्यो- तपाई आफु हुनुहोस्, आफ्नो सामान्य खेल खेल्न जानुहोस्, बाहिर जानुहोस् र रमाउनुहोस्। म यहाँ थिएँ, मलाई कुनै कुराको डर थिएन। मैले मेरो प्राकृतिक खेल खेलेँ, र सबै ठीकठाक भयो।
यो एक अविश्वसनीय अनुभव र एक आश्चर्यजनक भावना हो। यो क्षण हो जुन म र मेरो परिवारले मैले 8. बर्षको उमेरमा क्लबमा सामेल भएकोले पर्खेको थिएँ। म यसलाई शब्दमा पनि राख्न सक्दिन। म अझै गुलिएको छु। "
उनी लैम्पार्ड अन्तर्गत एक्सेलमा सेभेन्थ एकेडेमी खेलाडी हुन्: तपाईंलाई थाँहा थियो?… तारिक लाम्प्ते सातौं चेल्सी एकेडेमी स्नातक बने जसको अन्तर्गत प्रमुख पहिलो-टीम उपस्थित हुन थाल्यो फ्रैंक लम्पर्ड। उनले आफ्नो पाइला पछ्याए Fikayo Tomori, रेस जेम्स, मेसन माउन्ट र बिली गिलमौर.
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - ट्याटू र धर्म
ट्याटूहरू: हालको आधुनिक फुटबलमा, टिअट्टू संस्कृति धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। तारिक Lamptey लेखन को समयमा ट्याटु-मुक्त छ। उसको माथिल्लो र तल्लो शरीरमा कुनै मसी छैन।
धर्म: तारिक लाम्प्तेका आमा बुबाले उनलाई मुस्लिम धर्म अँगाल्नको लागि हुर्काए। यद्यपि त्यहाँ फोटो प्रमाणहरूको अस्तित्व रहेको छैन जुन तारिकले उनको धर्मको अभ्यास गरिरहेको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो तारिक लैम्प्टे बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।